The Moments | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
Carfew Poem →
June 7, 2010 · 8:34 pm
@office ! “သတိ” ပိုင်ရှင်ရှိသည်။
အဆိပ် လို့ ခေါ်တယ်။
I am offline. You can still send me
Knowledge is not limited to book…
😦 over steamed rice
connection is so bad 😦
သားဖြိုး လို့ခေါ်တယ်။ (Am)
ရန်ကုန်က ငါနဲ့ ငွေနဲ့
Document smuggled out of…